Runkeeper anozvimiririra neiyo iPhone neApple Watch Series 2 | Ndinobva mac
Runkeeper anozvimiririra neiyo iPhone neApple Watch Series 2
Kunyange chiri chokwadi kuti nhau idzi dzingaite sedzisingakodzere dingindira rekuti ndinobva kuMac, ndafunga kuiburitsa sezvo isu tichiwanzo taura nezveese Apple Watch uye Apple TV, zvishandiso izvo vazhinji vevaverengi vedu zvakare vane . Imwe yezvinyorwa zvitsva zvakaunzwa neApple Watch Series 2 zvichienzaniswa nemhando yapfuura, uye izvo zvinogona kukanganisa mashandiro atingaite nemhando yapfuura iyi GPS, kuwedzera pakuramba kwemvura zviri pamutemo, nechitupa. Iyo yakasanganiswa GPS inotibvumidza kuenda kumhanya kana kuchovha bhasikoro pasina kutakura iyo iPhone nesu, asi hazvisi zvese zvinoshandiswa nhasi zvaibvumidza.
Runkeeper achangobva akagadziridzwa kuti amire zvichienderana neiyo iPhone patinoenda kunofamba, kumhanya kana kuchovha bhasikoro, kubvira Kutenda kune yakavakirwa-GPS muApple Watch Series 2, chishandiso chinokwanisa kutsvaga pamepu nzira yese yatakatevera kubva patatanga application. Ehezve, isu tinofanirwa kumirira kuti tipedze kufamba kwedu kuti tikwanise kuona pafoni yedu nzira yatakatevera, kusanganisira kurova kwemoyo parwendo rwese.
Chirongwa Runkeeper ndeimwe yeakakwana kwazvo atinogona kuwana kuteedzera yedu yekuita muviri kuburikidza neApple Watch, kunyange zvishoma nezvishoma Runtastic uye Strava vari kuita vakwikwidzi vakaoma. Iye zvino zvese zvinoenderana nekuti chatinoda application ndecheMuchengeti kana chero eemaapplication andataura pamusoro. Iko kunyorera Runkeeper ye iPhone neApple Watch inowanikwa muApp Store zvachose mahara yekurodha pasi, kunyangwe zvichinzwisisika murudzi urwu rwekushandisa, tinogona kutenga mukati maro kuti tiwane mamwe mabasa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Runkeeper anozvimiririra neiyo iPhone neApple Watch Series 2